Ireo karazana takamoa isan-karazany eny an-tsena, iza amin'ireo no hofidina? | Green Renewable
Ireo karazana takamoa isan-karazany, iza amin'ireo no hofidina?
Tomas Bigorda | | Mitsitsy angovo, Toekarena an-trano, Tontolo_iainana
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny hafa isika karazana takamoa, izay matetika ampiasaina ao an-trano na birao, miaraka amin'ny tombony sy fatiantoka entiny.
Raha ny marina dia 18% amin'ny sandan'ny volavolan-dalàna momba ny herinaratra no laniana amin'ny jiro ao an-trano ary mihoatra ny 30% amin'ny birao. Raha misafidy karazana jiro sahaza ho an'ny fampiasana tsirairay dia hahazo isika mitsitsia eo anelanelan'ny 20% sy 80% angovo.
1 Fepetra tokony hodinihina alohan'ny hahalalana ireo karazana takamoa:
2 Inona ireo Lumens? Ary ahoana ny fanisana azy ireo
3 Fanolorana fahazavana ho an'ny efitrano ao an-trano
4 Karazan-jiro sy toro-hevitra amin'ny fisafidianana azy ireo
4.1 Ny takamoa Led tsara indrindra
4.2 Ny jiro halogen Eco tsara indrindra.
4.4 Ny takamoa Fluocompact tsara indrindra.
5 Inona avy ireo toetra tokony hodinihina?
Fepetra tokony hodinihina alohan'ny hahalalana ireo karazana takamoa:
1. Fahombiazana, izay ny watts (w) lanin'ny karazan-jiro isan-karazany.
2. Ny fiainana mahasoa, izay manondro ny fotoana maharitra ny karazana takamoa.
3. Ny loko, satria ny jiro izay havoakany dia ho mavo na fotsy miankina amin'ny fisafidianana ireo karazana jiro. Miankina amin'ny teknolojia tianao io, satria mety ho LED, eko halogen na fluocompact.
4. Ny tsingerina Izy ireo koa dia lafiny iray hafa tokony hodinihina rehefa misafidy ny karazana takamoa rehetra misy, satria ny takamoa tsirairay dia nametraka impiry teo ho eo izy ireo no azo novohana sy novonoina.
Zavatra iray hafa tokony hotadidina dia ny Tsela-pahazavana mamonjy angovo isainay araka ny anao izy ireo famirapiratana, amin'ny alàlan'ny refy antsoina hoe "lumens"Na"lumens”Izay manondro fotsiny ny habetsaky ny hazavana navoaka.
Fa kosa, etsy ambony takamoa dia refesina in Watts (W), manondro firy herinaratra mandany.
Inona ireo Lumens? Ary ahoana ny fanisana azy ireo
Ny fanontaniana voalohany tokony hapetraka dia ny manontany tena amin'ny tenantsika hoe inona ny Lumen?
Ny lumens dia singa iray amin'ny rafitra iraisam-pirenena momba ny fandrefesana handrefesana ny flux luminous, refin'ny herinaratra navoakan'ny loharano, amin'ity takamoa ity. Ny takamoa tsirairay dia miteraka eo anelanelan'ny 60 sy 90 lumens, mba hahafahantsika manisa izany jiro LED 15W iray manolotra a famoahana hazavana manodidina ny 1050 lumens. Inona no mihoatra na latsaka ny jiro ateraky ny jiro fanilo 65W.
Ity fitoviana ity dia vokatry ny manaraka: Lumens tena izy = Isan'ny Watts x 70.
Fanolorana fahazavana ho an'ny efitrano ao an-trano
Aorian'izay rehetra nohazavaina dia afaka mahita ohatra azo ampiharina bebe kokoa isika izay hisy ny fahalalana firy ny jiro ilaina amin'ny famonjy angovo ho an'ny toerana iray, izay mety ho efitrano rehetra ao an-trano.
Hahafantatra inona Haavo hazavana no atolotra, tsy maintsy jerentsika ny lux. Ity dia singa iray amin'ny hamafin'ny fahazavana ny rafitra iraisam-pirenena, misy ny marika lx, izay mitovy amin'ny hazavan'ny faritra ambonimbony izay mahazo flux mamirapiratra 1 lumen isaky ny metatra toradroa.
Midika izany, raha misy jiro jiro amin'ny efi-trano 400 lumen, ary ny velaran'ny efitrano dia 20 metatra toradroa, ny haavon'ny hazavana dia 20 lx.
Miorina amin'ity singa ity dia misy tarehimarika atolotra ho an'ny haavon'ny jiro ao amin'ny tontolon'ny trano, miankina amin'ny filan'ny toerana tsirairay ao an-trano:
Lakozia: ny tolo-kevitra momba ny jiro ankapobeny dia eo anelanelan'ny 200 sy 300 lx, na dia ho an'ny sehatry ny asa manokana aza (izay tapaka sy omanina ny sakafo) tafakatra 500 lx.
Efitrano fatoriana: ho an'ny olon-dehibe, ny ambaratonga tsy dia avo loatra dia atolotra ho an'ny jiro ankapobeny, eo anelanelan'ny 50 sy 150 lx. Fa eo an-dohan'ny farafara, indrindra ho an'ny famakiana eo, fahazavana mifantoka hatramin'ny 500 lx no tondroina. Ao amin'ny efitranon'ny ankizy dia atoro anao jiro ankapobeny kokoa (150 lx) ary manodidina ny 300 lx raha misy faritra misy ny hetsika sy ny lalao.
Efitra fandraisam-bahiny: ny jiro ankapobeny dia mety miova eo anelanelan'ny 100 sy 300 lx, na eo aza ny fijerena fahitalavitra dia asaina midina manodidina ny 50 lx ianao ary hamaky, toy ny ao amin'ny efitrano fatoriana, fahazavana 500 lx mifantoka.
Fandroana: tsy mila jiro be loatra ianao, tokony ho 100 lx no ampy, afa-tsy eo amin'ny faritra fitaratra, ho an'ny fiharatana, fanosorana makiazy na fikikisana ny volonao: manodidina ny 500 lx no atolotra anao koa.
Tohatra, lalantsara ary faritra hafa amin'ny lalana na tsy dia ampiasaina loatra: ny idealy dia jiro ankapobeny 100 lx.
Karazan-jiro sy toro-hevitra amin'ny fisafidianana azy ireo
Ny takamoa Led tsara indrindra
Izy ireo no fanafohezana ny Light Emitting Diode. ny taratra takamoa Izy ireo no mifanaraka indrindra amin'ny tontolo iainana, satria izy ireo dia maneho safidy ekolojika ary mahomby.
Izany dia satria tsy mamoaka CO2 be loatra amin'ny tontolo iainana tahaka ny hafa izy ireo karazan-jiro, ary koa tsy mampiseho tungsten na merkiora.
Raha dinihintsika koa ny endri-javatra lehibe naneho hevitra etsy ambony, ny androm-piainan'ny karazana takamoa isan-karazany, ny takamoa LED dia azo ampiasaina manodidina ny dimam-polo alina. Ny tahiry amin'ny resaka fihinanana dia lehibe kokoa noho ny manan-danja, satria handany manodidina ny 80% latsaky ny bolam-boasary mahazatra hafa.
Ny jiro halogen Eco tsara indrindra.
Ny jiro omen'ireto karazan-jiro ireto dia voajanahary indrindra ary mihodina eo noho eo izy ireo. Mikasika ny fiainana mahasoa azy dia matetika adiny roa arivo izy io, mandany valopy latsaka ny ampahatelony noho ny tsy mahay mandanjalanja, izay holazainay etsy ambany.
Ilaina ny mihevitra ny fahaverezan'ny angovo vokatry ny hafanana vokany, satria ity karazana jiro mamoaka hafanana izy ireo.
Ny fanjifana angovo no avo indrindra amin'ny takamoa rehetra, izay ho hitantsika taratra aorian'ny faktiora amin'ny herinaratra.
Soa ihany fa nanomboka ny taona 2009 dia namokatra izy ity ny fisintahana an'ity karazana jiro jiro ity eny an-tsena, manome lalana vahaolana tsara kokoa izay manome valiny mitovy amin'ny famirapiratana, fa amin'ny fanjifana ambany kokoa. Mandritra izany fotoana izany dia betsaka ny tsingerina ao aminy, tsy mamokatra hafanana izy ireo ary mamerina ny miloko tsara.
Ny takamoa Fluocompact tsara indrindra.
Ireo karazana takamoa ireo dia fantatra amin'ny hoe comsumsi ambany; manana fiainana mahasoa eo anelanelan'ny fito arivo sy folo alina ora, ary mandany eo anelanelan'ny 75 sy 80% isan-jato ambany noho ny jiro nentim-paharazana.
Raha ny jiro entiny dia ireto karazan-jiro mitsitsy angovo Tsy dia soso-kevitra be izy ireo hampiasaina amin'ny faritra fitaterana. Satria matetika dia maharitra segondra vitsy alohan'ny hanoloranao ireo rehetra ireo herin'ny jironao.
Inona avy ireo toetra tokony hodinihina?
a) Ny fotoana ilana jiro mba hahatratrarana fampisehoana faratampony, izany hoe, haingana be izy io.
b) Ny zoro aperture na ny hazavam-pahazavana, izay midika fa amin'ny zoro ambany, hifantoka amin'ny teboka manokana kokoa ny jiro.
c) Ny fiainana ilaina amin'ny jiro, izany hoe ny ora izay aharetan'ny jiro.
d) Amin'ny fomba fijery estetika, hanatrika ireo taratasy izahay. Afaka mahita jiro bolibola, boribory, spiral na labozia isika.
e) Misy ihany koa ny karazana bushing isan-karazany arakaraka ny savaivony sy karazana kofehy manana.
f) Isaky ny jiro azo alefa sy hovonoina, izany hoe, ny tsingerin'izy ireo.
g) Ny herin'ny hazavana na ny hazavana, amin'ny fomba izay ny habetsaky ny lumens dia hahazo jiro bebe kokoa isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Ireo karazana takamoa isan-karazany, iza amin'ireo no hofidina?
Suisse no mifidy ny tetikasa hanakatonana ny toby famokarana angovo nokleary ao aminy
Ahoana no fiasan'ny turbine na koveta-drivotra?